OMN Tamsaasa Saatalaaytitti deebi’e – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
Mootummaan Iityoophiyaa shira xaxuun gaafa Dilbata darbe irraa kaasee tamsaasa OMN addaan kutuun isaa ni yaadatama.
Haata’u malee akkuma kanaan dura waadaa isinii seenneen, carraaqqii jajjabaa bulchiinsi OMN taasiseen, tajaajilli tamsaasa miidiyaa walabaa kun amma kun eegalee jira.
OMN rakkoo fi odeeffannoo dhugaa ummatichaa ifatti baasuudhaaf bu’uuruma irraa jalqabee irratti hojjataa kan turee fi, ammas kan itti jiru yoo ta’u, gara fuula durattis cichoominnaan kan ummata isaatiif hojjatu ta’uu isin hubachiifna.
Shirri miidiyaa walabaa ugguuruudhaa kun, yeroo gara yerootti jabaatus, bulchiinsi OMN murannoo gahaadhaan halkanii fi guyyaa irratti hojjachuun, tamsaasni kun akka addaan hin dhaabbanneef hojjataa tureen, kunoo ammas milkiin jabaan argamee jira.
Karaan satalite haarofni ittin nu daawwattan…
Maqaa BILISUMMAA jedhuun nu argattan
OMN ijaafi gurra keessani. Gargaarsa, yaadaa fi qabeenyi keessan daran jabaatee itti fufuu qaba.
Warri gargaaruu barbaaddan gara website keenyaan www.oromiamedia.org/donate suduudan miseensa ta’uun ykn al tokkotti baasun ni danda’ama.
Bulchiinsa OMN irraa!